Translate manninae from Chamorro to Burmese - MyMemory
Results for manninae translation from Chamorro to Burmese
Manninae y finoña ya manninajomlo sija, yan manninalibre sija guinin y yinilangñija.
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့အနာကို ငြိမ်းစေ၍၊ ဖျက်ဆီးခြင်းအရာများထဲက နှုတ်ယူတော် မူ၏။
Ya despues di ayo sija, manninae sija jues sija asta qui mato y profeta Samuel.
ထိုနောက်မှပရောဖက်ရှမွေလမပေါ်မရှိမှီ အနှစ်လေးရာငါးဆယ်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး၊ တရားသူကြီးတို့ကိုပေးတော်မူ၏။
Entonses mamaela si Jesus, ya jachule y pan ya manninae, ya y güijan taegüenao.
ယေရှုသည် လာ၍မုန့်နှင့်ငါးကိုယူပြီးလျှင် သူတို့အား ပေးတော်မူ၏။
Ya susede, anae matachong gui lamasa yan sija, jachule y pan ya jabendise, ya jaipe ya manninae.
စားပွဲ၌ သူတို့နှင့်အတူ လျောင်းတော်မူစဉ်၊ မုန့်ကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍ သူတို့ အား ပေးတော်မူသည်တွင်၊
Ya despues manmalago ray: ya manninae as Yuus as Saulo lajin Sis, un taotao gui tribon Benjamin para cuarenta años.
နောက်တဖန် ရှင်ဘုရင်ကို တောင်းကြသော အခါရှောလု အမည်ရှိသော ကိရှ၏သား၊ ဗင်္ယာမိန် အမျိုးဖြစ်သောသူကို အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးပေးတော်မူ၏။
Sa yaguin manninae sija locue as Yuus y ninae, taegüije y janaejit anae jumongguejit y Señot Jesucristo, ya jayeyo na siña jucontra si Yuus?
သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သောငါတို့အား ဘုရားသခင်သည် ဆုကျေးဇူးကို ပေးတော်မူသည် နည်းတူ၊ ထိုသူတို့အားလည်း ပေးတော်မူသည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကို ဆီးတားနိုင်သနည်းဟု ပေတရုဆို၏။
Ti manninae jamyo as Moises y tinago sija, ya taya uno guiya jamyo cumumple ya tinago sija? Sajafa na inprocucura para inpino yo?
Pot este si Moises manninae jamyo ni y circunsision (na ti guine as Moises lao iyon y tata sija), ya asta pago gui sabado incircunsida y taotao.
accretion (English>French)mai tum se khari bar puch rha hu (Hindi>English)bhajiwala ko english me kya kehte hai (Hindi>English)juristische (German>Romanian)which color best my eyes (English>Hindi)erhvervsinvesteringer (Danish>Spanish)conformité (French>Wolof)sir aapko book mil gai (Hindi>English)acido bulico (Spanish>English)الجلسات (Arabic>English)habere diem (Latin>English)kersenbomen (Dutch>German)कुवारी दुलहन (Hindi>English)main ladki nahi hun ladka hun (Hindi>English)اريد ذلك بشدة (Arabic>Spanish)réaliser la finition des marges comme suit: (French>Italian)该过程顺利而和平 (Chinese (Simplified)>French)jüngster tag (English>Greek)ipon ng gamit (Tagalog>English)며 (Korean>Thai)cuantos esyudiantes hay en la sala de clase (Spanish>English)odluku (Croatian>Maori)sinisipa kasing kahulugan (Tagalog>English)neuralgia (Finnish>Danish)carboni (Italian>Tagalog)